Diyaarada Duqeeyay Magaalada Darna Ee Bariga Dalka Liibiya. – Calamada.com
Diyaarada Duqeeyay Magaalada Darna Ee Bariga Dalka Liibiya.
Afar ruux oo rayid ah oo ay ku jiraan laba dumar ah ayaa geeriyootay, tiro kalena way dhaawacmeen, kadib markii diyaarado dagaal oo taabacsan Dagaal oogaha Shareeco la dirirka ah ee Khaliifa Xaftar ay duqeeyeen magaalada Darna ee ku taalla Bariga Dalka Liibiya.
Ilo wareedyo ku sugan magaalada ayaa sheegay in duqeyntu ay abuurtay xaalad argagax leh markii ay dhowr gantaal kusoo dhaceen meel ku dhow guryo ay daggan yihiin dad rayid ah, halkaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Wariye ku sugan magaalada Darnah ayaa soo sheegay in duqeyntani aysan aheyn tii ugu horreysay ee diyaaradaha dagaalka ee Khaliifa Xaftar ay magaaladaasi ka fuliyaan, balse tiro dhowr jeer ah ayay diyaaraduhu duqeeyeen magaaladaasi, iyagoona dilay tobonaan ruux oo aan waxba galabsan.
Maleeshiyada Dagaal ooge Khaliifa Xaftar waxay ku sugan yihiin meel qiyaastii 30 km Jihada Koonfureed kaga beegan magaalada Xeebta ku taalla ee Darnah, waxay sidoo kale saldhig ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Martuubah, kaas oo qiyaastii 35 km jihada bari kaga beegan magaalada.
Ciidamada ka amar qaata Khaliifa Xaftar ayaan muddo Sanad ku dhow wax dhaq-dhaqaaq ah ka sameynin furimaha la isku hor fadhiyo ee duleedka magaalada Darnah, waxayna iska caabin adag kala kulmayaan xoogagga Golaha Shuurada Mujaahidiinta ee magaalada Darnah iyo kooxo kale oo kacdoon wadayaal ah oo gudaha magaaladaas ku sugan.
Dagaal oogaha Shareeco la dirirka ah ee Khaliifa Xaftar ayaa taageero xooggan ka helaya Dowladaha reer galbeedka ee Mareykanku ugu horreeyo, isagoona Ciidameeyay Kumanaan Maleeshiyaad ah oo ka haray Maamulkii hore ee Dalka Liibiya ee uu madaxweynaha uu ka ahaa Mucammar Al-Qadaafi, waxaana Maleeshiyadaasi ay dagaallo adag kula jiraan Jamaacaatka Jihaadiga ah ee maamulaya magaalooyin kuyaalla Koonfurta iyo Bariga dalka Liibiya.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 17-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 17-07-1437 Hijri.